Waraanni Kun Waraana Sabaa fi Sabl-lammii Hundaa ti |
Waraanni Kun Waraana Sabaa fi Sabl-lammii Hundaa Ti
Damee Boruu: Sadaasa 8, 2020
Waraanni gocha humnaan fedhii fi hawwii aangoo siyaasaa bakkaan gahachuuf godhamu dha. Waraana abbaa jalqabuu malee abba injifatuu fi yoom akka raawwatu namni beeku hin jiru. Waraanni har’a Impaayeera Itoophiyaa keessatti Mumicha Ministeeraa bara darbeen labsame waraana Uummata Tigray qofaa irratti labsame miti. Waraanni kun waraana sabaa fi sab-lammii Itoophiyaa irratti warra wal qixxummaa sabootaa balfatuun labsame waan taheef akka doomuu fi gufatu gochuun gahaa hunda keenyaa ti.
Kononeel Abiyi waraana kana irraa bu’aa tokko illee hin argatu. Garuu fedhii isaan harkaa warra nafxanootaatti kufee afaan isaanii kan dubbatu(puppet) tahee waan jiruuf ergaa isaanii raawwachuuf dirqama fudhatee jira. Kana dura waraanni Uummata Oromoo irratti labsamee wagga lamaa ol lakkobsiee jira. Ergasii as Uummata Sidaamaa, Walayitaa fi Benshaangulii fi warra hafan Mootummaan Nafxanyoota yaroo barbaadan barbadeesaa akka jiran agarra.
Shirri waan hundaa dura dalagamee nafxanyoonni hawwii Kononeel Abiyi aangoof qabu hubatanii gargaartuu isaa fakkaatanii Uummata Oromoo irraa adda isa kutuu dha. Karaa kana milkaa’anii jiru. Kononeel Abiyi uummata dhiiga isaa dhangalaasee gara aangoo isa fide ganee nafxanyoota warra aangoo kee siif tiksina jedhu itti galii gale. Isaan huduu isaa jala deemanii akeekaa isaanii aangoo bara Minliki deefachuuf shira hiikaa hin qabne xaxuu itti fufanii jiru.
Akeeka qaban keessaa inni duraa humna isaan dura dhaabbata jedhanii yaadan hundaa tokko tokkoon balleessuu dha. Waraanni Uummata Oromoo irratti godhamu utuu itti jabeessaa jiranii Mootummaan Naannoo Tigray immoo jabaatee yaaddoo guddaa itti tahee hirba isaan dhorkaa jira. Hooggantoonni Oromoo mana hidhaatti guuramanii akka dararaman gochuu, Qeerroo fi Qarreen Oromoo warri ajjeessuu fi mana hidhatti guuruun akka yaroof injifannoo argatan itti fakkata. Oromummaan yakka tahe akka himatamuu fi rukkutamuu olola dhuma hin qabnes godhanii jiru. Sabni Oromoo kana booda bakka kufee ka’ee akka isaan injifachuu hin danda’u jedhanii waan abdataniif fuula gara Tigray deebifachuu filatanii jiru.
Raayaa Ittisa Biyyaa jedhamee kan waamamuu kan uummata keessaa bahee biyyaaf dhaabbatu utuu hin taane akka ashakarii mataa isaanii godhatanii fudhatu. RIB bakka isaan ergan deemee ajajan yakkamaa raawwachuu malee maaliif kun taha jedhee illee gaafachuu bakka hin dandeenye irra jira. Karaa kanas waan milkaa’an fakkaatu. RIB keessa “Brigeedni” saddaffaa Naannoo Tigray jiru irraa kan hafe uummataa fi daangaa biyaa eeguu dhiisee Oromiyaa fi Kibba keessatti daa’imaa fi dubartii ajjeessuu irratti bobaafamee jira. Yaroo inni uummata saamuu fi qabeenya uummata barbadeesu arguun nama qaanesa. Garuu akeeknii fi naamusni RIB akka uummata nagaa gooluu fi jeequu hin taane eenyu jalaa iyyuu dhokataa miti. Sababa kanaaf RIB akkuma bara Dargii sana deebi’ee faca’uu irraa oolaa hin jiru.
Kana malee hawwii fi yaada federaalummaa diiguu waan qabaniif naannoo hunda keessatti jeequmsaa uummanii namootni dhalootan Amhaara tahan akka balaaf saaxilman gochaa jiru. Namoota nagaa dhiiga wal dhangalaasuun bu’aa siyaasa rakasaa irraa argachuuf yaallii gochaa jiru. RIB bakka namni Amhaara jiru hundaa deemee akka waardiyaa dhaabbatuu gochuuf fedha qabu. Sababni isaan kana godhaniif utuu naannoon of bulchuun jiru lammiin biyyaa bakka barbaade deeme nagaan jiraachuu waan hin dandeenyeef naannoon of bulchuun hafee biyya tokko, afaan tokko, alaabaa tokko fi moottummaa tokko qofa qabaachuu qabna yaada jedhan jabeefachuu barbaadu.Yaada isaanii kana fudhachuu garbummaa bara Minilki sana fudhachuu dha.
Waraanni Tigray irratti baname warra nafxanyaaf galmi isaa inni duraa Mootummaa Naannoo balleesuu irratti kan xiyyeefate yoo tahu Kononeel Abiyiif immoo humna aangoo isaaf sodaachisaa tahe isa duraa TPLF balleessuu dha. Kana irratii fedhiin isaanii wal simatee jira. Warri nafxanyaa maqaa lafa falmachuun Uummtni Amhaaraa akka Uummata Tigrayi irratti jibinsaa horatuu fi duulu ololli guddaan godhamaa tureera. Mootummaan Naannoon Amhaaraa humna Federaalaa ofiin jedhu wajjin dhaabatee akka Uummatni Amhaaraa fi Tigray wal fixu gochuun adaba dhabuu fi rakkina dhaloota boruuf dabaraa jiru hubachuu dadhabuun isaa wal nama gaafachiisa.
Nafxanyoon har’a nama maraataa kana Kononeel Abiyi of duraa oofan waraana Tigray irratti banan akka injifatan abdii qabna jedhu. Achii gaafa of duuba deebi’an sabaa fi sab-lamii Impaayeera Itoophiyaa akka irra deemani ibsuuf ilmi nafxanyaa tokko jedhe “garbuu” irra deemuun salphaa dha. Jechuun isaa warra hafan balleessuuf rakkina hin qabnu jechuu isaa akka tahe ifaa dha. Kanaafuu karaa nuuf danda’ameen akka humni nafxanyaa kun hin milkoofnee gochuu qabna. Waraanni Uummata Tigrayi irratti godhamaa jiru waraana sabaa fi sab-lammii Impaayera Itoophiyaa hundaa irratti godhamu irraa adda miti. Humna nafxanyaa kana wajjin dhaabbatanii haqaa fi mirga Uummata Tigray gaaga’uun seenaanis tahe seeraan nama gaafachiisa.
Warra horiif jedhee haqaa fi mirga uummataa doomsuuf duulaa jiru dura dhaabbachuun qajeelaa dha. Warri didee lola deemu garuu akka nagaan deebi’anii hin gallee beekanii deemuu qabu. Uummatni Amhaaraa lafa argateejedhamee warra nafxanyyoota kanaaf meeshaa tahee balaa waraana adda duraan (cannon fodder) waan dhumuu hin qabu. Warri nafxanyaa utuu Uummata Amhaara jaalatu tahee isa wajjin jiraatanii isa wajjin qabsaa’u ture. Isaan bashanananii lola irraa fagaatanii Finfinnee keessa akka jiraatan Uummatni Amhaara wareegamuuf qaba. Waraana kana keessatti duraan dursanii lubbuu isaanii kan dhabuuf jiruu fi jireenyi isa kan barbada’u uummata naannoo waraanaa jiraatu. Dabalataan lafa irraa jiraatan dhisanii lafa keessatti owwaalaman barbacha deemuun gowwumaa dha.
Waraanni nafxanyaa buqqaa’e gara Tigray deemuun WBO fi Uummata Oromoo akka afuura baafatu ni gargaara. Haala yaroo uumame kana ayyaanna godhachuudhaan WBO, Qarree fi Qeerroon walii gala Uuummatni Oromoo kadiree fi kaabinee PP hatattamaan Oromiyaa keessaa haxxoofnee baasuudhan caasaa Mootummaa Oromiyaa diriirsu irratti xiyyefachuu qabna. Warri qawwee PP baatu garaa uummata isaanii goruu yookan qawwee baatan Qeerroo fi Qarreef kenaanii jireenya mataa isaanii akka jalqaban gochu. Yaroo kana kan bareechee beekamuu qabu Oromoo tahee ijaarsa PP dhiigaa ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruu fi qabeenya Uummata Oromoo barbadeessa jiru wajjin dhabbachuun badii isa dhumaa waan taheef adabbii guddaa akka argachuu qabu dha. Kana booda dhiifama walii gochuun ni dhuma.
Previous articleEthiopia parliament dissolves Tigray leadership
Next articleWaraana calqaba isaa malee xumurrii fi ittibahinsi isaa hin beekamne – Oromoon maal godhuu qaba?